Ukuncika Kwesu Lokukhangisa Elingenayo | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 15, 2013 NgoMgqibelo, Juni 15, 2013 Douglas Karr
Besilokhu sibonisana namakhasimende amakhulu namancane izinyanga ezimbalwa manje futhi sikholwa ngempela ukuthi kunezikhala ezithile kumasu amaningi nokuxokozela okuningi nabanye. Lapho amaklayenti ethu edonsa kanzima, siyabona ukuthi kukhona igebe ekuncikeni okubalulekile kokumaketha kwabo kukonke. Isu lokumaketha eliphumelelayo kungenzeka lingabandakanyi ukumaketha komkhiqizo, ukufinyelela or ukuthuthukiswa komphakathi - kepha kuncike kakhulu kubo.
Brand - cishe akunakwenzeka ukuba necebo lokumaketha elingena ngaphakathi uma ungenakho ukubukeka nokuzwakala okungaguquguquki, imiyalezo eqinile nezwi lenkampani yakho, imikhiqizo nezinsizakalo. Abantu badinga ukukubona futhi baqonde ukuthi uzuza kanjani kubo.
Isiphathimandla - Ukufinyelela ikakhulukazi kubonwa njengomzamo wobudlelwano bomphakathi kepha ukwandisa izithameli zakho ngokuthola abanye ku-inthanethi kubalulekile. Abantu abaningi bezokuxhumana nabantu bazokutshela nje ukuthi uzakhela izithameli zakho. Kungani ungakwenza lokhu uma othile esenazo lezo zilaleli? Hambani niyobathola!
Community - Ukwaluka nokukhula izilaleli emphakathini okhulayo kudinga isu lokuqukethwe eliyingqayizivele, ukunakwa okuningi, neqembu elinethalente. Kodwa-ke, uma usuthole umphakathi - unebutho labakhangisi. Kuyinto engcwele yezokuxhumana!
Ukuguqulwa - ngaphandle kokusetshenziswa okufanele kwe analytics, nokwenza kahle nokuhlola, ngeke ukwazi ukuguqula imikhondo onayo ibe amakhasimende. Ukukhomba, ukukala nokwenza ngcono indlela yakho yokubandakanya kubalulekile.
Ama-ejensi amaningi wokukhangisa akhathazeke kakhulu ngokuthola isabelo sawo sesabelomali sokumaketha futhi ajwayele ukuphoqa izinkampani ukuba ziqonde ngakubo. Inkinga ukuthi lokhu kunjengemilenze eya etafuleni… uma ukhipha eyodwa, eminye ayisebenzi kahle. Lapho sisebenza neklayenti, sihlala siphikelela noma sibaphusha ukuthi basebenze nabo Ukufaka uphawu izinhlangano, amafemu obudlelwano bomphakathi futhi ukuthuthukiswa komphakathi izinkampani.
Noma sisebenza ngempumelelo engu-100%, ngaphandle kwanoma iyiphi enye yezinto, isu lokumaketha elingene kakhulu alisebenzi kangako. Ukuqinisekisa ukuthi ukuncika ngakunye kusetshenziswa ngempumelelo kunikeza inkampani ukufinyelela okukhulu kwezentengiso, amandla nokusebenza.
UJun 17, 2013 ngo-1: 39 AM
Isu elisebenza kahle kakhulu lokumaketha. Kwesu lendawo yokumaketha kubaluleke kakhulu ukuthola impumelelo. Ngiyethemba ukuthi i-athikili yakho izongisiza kakhulu !!
UJun 17, 2013 ngo-6: 49 AM
Okuthunyelwe okuhle uDoug! Bengikuthanda kakhulu okuthunyelwe lapha .. Siyabonga ngokwabelana…